2 Siyaabaha Bedelka Music ka Lugood in HTC One | Music Transfer
Hayso ah maktabadda weyn Lugood iyo hadda aad iibsato HTC Mid ka mid ah (M8). Waa in aad rabtid in lagu wareejiyo music oo dhan ka Lugood in HTC Mid ka mid ah, si aad ku raaxaysan karaan music ka Socda. Tan iyo Lugood kaliya u shaqeeya iPhone, iPad iyo iPod, inay ka sameeyaan, waxaad u leedahay in aad kaalmo ka qaar ka mid ah qalab dhinac saddexaad weydii. Mahadsan tahay wanaaggii, waxaa tahay qalab badan oo dhinac saddexaad oo waxtar leh laga heli karaa, kaas oo ka mid ah Maareeyaha nidaameed HTC iyo Wondershare TunesGo (Mac) taagan. In this article, waxaana idin tusin doonaa sida loo isticmaalo laba qalab ka Lugood wareejiyo music in HTC Mid ka mid ah. Waxaad ku akhriyi kartaa iyo dooran taas oo qalab fiican yahay.
Qaybta 1. Sidee si ay u gudbiyaan Music ka Lugood in HTC Mid ka mid ah la Manager HTC nidaameed
Qaybta 2. Sida loo saar Lugood Music on HTC Mid ka mid ah la TunesGo Wondershare
Qaybta 3. barbardhig Manager nidaameed HTC iyo Wondershare TunesGo
Tababare HTC nidaameed loo abuuray by HTC Company, loo isticmaalo si ay u maareeyaan phone HTC ka computer si fudud. Waxaa si fudud u dajiyaan karaa music ka Lugood iyo Windows warbaahinta Play, ka dibna u hagaagsan in HTC Mid ka mid ah. Halkan waa Hanuunki buuxda oo ku saabsan sida loo hagaagsan HTC Mid ka mid ah la Lugood si aad u hesho music oo dhan.
Tallaabada 1. Download Manager HTC nidaameed ee aad PC ama Mac OS sida ay computer aad. Halkan, waxaan qaadan version Mac sida tusaale.
Tallaabada 2. Maareeyaha Run HTC nidaameed ee Mac. Connect aad HTC Mid ka mid ah in ay Mac adigoo isticmaalaya cable USB ah. Mid ka mid ah Your HTC dhowaan la ogaan doonaa.
Tallaabada 3. By default, waxa ay si toos ah u keensada music oo dhan in Lugood Maamulaha HTC nidaameed. Guji ku Music tab. Sida Tani Computer buugga waa playlists laga keeno ka computer. music Lugood waxaa lagu keydiyaa Lugood farshaxanka Screen Saver.
Tallaabada 4. Haddii music Lugood aan tusay, aad sax karaa Display galeeysid bidix iyo shilinta toos ah dhoofsadaan ka Lugood Maamulaha HTC nidaameed .
Tallaabada 5. In galeeysid bidix, guji nidaameed > Sax nidaameed playlists xulay > Lugood farshaxanka Screen baado . Markaas, tag ilaa dhankiisii ​​bidix hoose guji nidaameed .
Taasi waa sida loo dhigay music on HTC Mid ka mid ah ka Lugood. Muuqdaa fudud oo ku habboon, sax? Markii aan u isticmaali, waxaan ka heli in:
1. Tababare HTC nidaameed ma dajiyaan music oo dhan ka Lugood sida uu sheegaayo.
2. Waxa kaliya dhoofista songs, ma playlists. Sidaas darteed, haddii aad rabto in aad playlists ka Lugood wareejiyo HTC Mid ka mid ah, waxaan soo jeedinaynaa in aad isku daydo in qalab kale - Wondershare TunesGo (Mac).
Qaybta 2. Sidee si ay u gudbiyaan Lugood Music inay HTC Mid ka mid ah la TunesGo Wondershare
Sida Manager HTC nidaameed, Wondershare TunesGo (Mac) ama Wondershare TunesGo (Win) ayaa sidoo kale ka shaqeeyaa si fiican u kala wareejinta music Lugood in HTC Mid ka mid ah. Waxa ay si fiican. Just mid click, waxa ay ku wareejin karaa dhammaan ama music soo xulay iyo playlists ka Lugood in Android, filimada, Lugood U, podcasts iyo TV muujinaysaa aad u wareejiyo. Ka sokow, aad jiidi karaan iyaga oo hoos u HTC Mid ka mid ah. Ka hor wareejinta music Lugood, waxaad nadiifin kartaa ilaa Library Lugood by qamaar music ID 3 iyo tirka songs nuqul.
Waxaa la socon kara HTC Mid ka mid ah, HTC ugaar ah, iyo damac HTC iyo aaladaha kale ee HTC in ordi Android 2.1 iyo ka dib.
Tallaabooyinka Easy ku saabsan sida ay u gudbiyaan Lugood Music inay HTC Mid ka mid ah la TunesGo Wondershare
Tallaabada 1. Run Wondershare TunesGo on Mac ama PC iyo aad u hesho HTC Mid ka mid ah ku xiran cable USB ah.
Tallaabada 2. Sida caadiga ah, Lugood si toos ah u socon doonaa. Haddii aan, waxay gacanta u ordaan. Markaas, software muuqan doonaa xaqa ka Lugood.
Tallaabada 3. Tag tab nidaameed ee. Waxaad sidoo kale u hagaagsan kartaa maktabadda Lugood oo dhan ama playlists kaliya u hagaagsan soo xulay. Dooro mid ka mid ah oo guji nidaameed .
Bedelka oo dhan Music Lugood in HTC
Bedelka xulay Lugood music iyo playlists in HTC Mid ka mid ah
Delete songs nuqul in Lugood
Nidaameed HTC music iyo playlists in Lugood (Version Mac sameeya)
Taageerada Samsung, LG, Motorola iyo qalab Android dheeraad ah
La jaan qaada Windows & Mac
> Resource > Transfer > 2 Siyaabaha Bedelka Music ka Lugood in HTC Mid ka mid ah